FRONTLINE COMMANDO အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2021 - အခမဲ့ - 9Apps
ဒေါင်းလုပ် XAPK（329.4MB） ယခင်ဗားရှင်း
၏ဖော်ပြချက် FRONTLINE COMMANDO: D-DAY
WW2 ၏အကြီးဆုံးမဟာမိတ်ကျူးကျော်မှုတွင်လှံတံ၏ထိပ်ဖျားအဖြစ် D-Day တွင်အားသွင်းပါ။ သိမ်းပိုက်အင်အားစုများကိုအနိုင်ယူပြီးပြင်သစ်ကိုသိမ်းယူပါ။ သငျသညျနော်မန်၏ကျေးလက်တရှောက်လုံးကိုစစ်တိုက်သောအခါ, ကမ်းခြေမုန်တိုင်း, တုတ်ကျင်းကိုရှင်းလင်းနှင့်မြို့များကိုလွတ်မြောက်။
ရင်သပ်ရှုမောဖွယ် console အရည်အသွေးပုံရိပ်တွေ, တိကျသောထိန်းချုပ်မှု, အဆင့်မြင့်နှင့်အတူအဆုံးစွန်တတိယလူသေနတ်သမားကိုခံစားပါ။ ရူပဗေဒ, ဖျက်ဆီးနိုင်သောပတ်ဝန်းကျင်နှင့်အပြည့်အဝ voiceovers ။ စစ်ပွဲ၏အရှိန်အဟုန်ကိုခုန်။ သင်၏ကိရိယာကိုအကန့်အသတ်ဖြင့်တွန်းပို့ပါ။
ကမ်းခြေကမ်းခြေပေါ်တွင်အခြေခံသည့်သီးခြားမစ်ရှင် ၁၄၅ ခုနှင့်သီးခြားကင်ပိန်း ၅ ခုကိုတွေ့ကြုံခံစားပါ။ Juno, ဓား, Utah, ရွှေနှင့် Omaha- ။ မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့များတိုးတက်စေရန်ခွင့်ပြုသည့်အင်အားကြီးသောတင့်ကားများနှင့်အမြောက်များကိုဖျက်ဆီးပစ်ပါ။ စာရေးကိရိယာသေနတ်ကိုကိုင်ပြီးခိုင်ခံ့သောနေရာများမှချထားပါ ဗုံးကြဲလေယာဉ်များနှင့်၎င်းတို့၏အစောင့်အကြပ်များကိုသူတို့၏ ၀ န်ထုပ် ၀ န်ထမ်းများမထုတ်ယူမီချွေရန် Ack-Ack လေယာဉ်ပျံသေနတ်များကိုကိုင်တွယ်ပါ။
WARZONE မှတဆင့် run! ရန်သူနယ်မြေ၏အလယ်ဗဟိုသို့သင့်လမ်းကိုတိုက်ခိုက်ပါ။ ရန်သူမီးမှကာကွယ်ရန်သင်နောက်မျက်နှာဖုံးသို့ပြောင်းသွားစဉ်စစ်မြေပြင်မှရှောင်ကျဉ်နေသောမိုင်းများနှင့်အတားအဆီးများကိုခုန်ကျော်သွားပါ။ ဖျက်ဆီးပစ်နိုင်သောအဖုံးများမှ ထွက်၍ ရန်သူလှိုင်းတံပိုးများကိုတိုက်ခိုက်ရန်ထွက်ခွာပါ။
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မှဂန္ထဝင်လက်နက်များဖြင့်ရှေ့တန်းသို့လိုက်ပါ။ ၂။ ရန်သူများကိုဖယ်ရှားရန်သမိုင်းဝင်ရိုင်ဖယ်ကိုယူပါ။ တိကျစွာသို့မဟုတ် အကယ်၍ သင်ကြိုက်ပါကကျည်ဆံတစ်စက်ကျည်ဆန်ထုတ်ပစ်ရန်သေနတ်တစ်လက်။ အမြောက်တပ်အားဖြိုခွဲရန်အတွက်ရန်သူစစ်သားများကိုတိုက်ခိုက်ပါသို့မဟုတ်တင့်ကားအားအမှိုက်ပုံသို့လျှော့ချပါ။
ကျေးဇူးပြု၍ မှတ်ချက်။ ။ - ဤဂိမ်းသည်ကစားရန်အခမဲ့ဖြစ်သော်လည်းသင်၏ဂူဂဲလ်အကောင့်အားငွေသွင်းသည့်အပိုပစ္စည်းများအတွက်အမှန်တကယ်ငွေပေးချေရန်သင်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ သင်၏ကိရိယာချိန်ညှိချက်များကိုညှိခြင်းဖြင့် In-app ၀ ယ်ယူခြင်းကိုသင်ပိတ်နိုင်သည်။
- ကျေးဇူးပြု၍ သေချာစွာဝယ်ပါ။ - - ဤဂိမ်းတွင်ကြော်ငြာခြင်းပေါ်လာသည်။ အသုံးပြုသူများသည်ဤအင်္ဂါရပ်များပေါ် မူတည်၍ တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ခွင့်ပြုသည် (ဥပမာ - စကားပြောခန်းများ၊ ကစားသမားမှကစားသမား chat၊ စာတိုပေးပို့ခြင်း) ။ လူမှုရေးကွန်ရက်များသို့ချိတ်ဆက်ခြင်းသည်ထိုကဲ့သို့သောလူမှုကွန်ရက်ဝက်ဘ်ဆိုက်များ၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်သောသူများအတွက်ရည်ရွယ်ခြင်းမဟုတ်ပါ။
- Glu သည်သင်၏ဒေတာများကိုမည်သို့စုဆောင်းသည်နှင့်မည်သို့အသုံးပြုသည်ဟူသောအချက်အလက်များအတွက် ကျေးဇူးပြု၍ ကျေးဇူးပြု၍ ကျေးဇူးပြု၍ ဆက်သွယ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏သီးသန့်တည်ရှိမှုမူဝါဒကို www.Glu.com/privacy တွင်ဖတ်ပါ။ - အကယ်၍ သင်ဤဂိမ်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပြproblemနာရှိပါကဂိမ်း၏“ အကူအညီ” အင်္ဂါရပ်ကိုအသုံးပြုပါ။
တွစ်တာ @glumobile ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုလိုက်နာပါ။ Facebook.com/glumobile
READ_CONTACTS - သင့်သူငယ်ချင်းများကိုကစားရန်ဖိတ်ကြားရန်အတွက်ဂိမ်းသည်သင်၏အဆက်အသွယ်များကိုသာဖတ်သည်။
getLine1Number - ဒီခွင့်ပြုချက်ကိုမတော်တဆထည့်သွင်းခဲ့ပေမယ့်ဒီဂိမ်းကမသုံးပါဘူး။ ကျနော်တို့မဝေးတော့တဲ့အနာဂတ်မှာအတွက် update ကိုအတွက်ဖယ်ရှားပါလိမ့်မယ်။
ဘာအသစ်လဲ FRONTLINE COMMANDO: D-DAY 3.0.4
Frontline commandodday not working | Frontline commandodday game problem solve 2021
BRK Gaming World
commando frontlinedday music 3
commando frontlinedday music 2
Can play good for low version 5.1.
1268 ၊၊၊၊းန။ မုာအငညပု1387094ထမ8ဍတအဟမဣဢ85.6